Hevitra mandalo,resaky ny mpitsimpona akotry: fahasiahan’ny fahantrana, ditran’ny fitantanana | NewsMada
Hevitra mandalo,resaky ny mpitsimpona akotry: fahasiahan’ny fahantrana, ditran’ny fitantanana
Manjaka ny fahantrana eto amin’ny Nosy. Lazaina ho resena vao mainka mihamahazo vahana Rafahantrana. Fantatra fa betsaka ny harena voajanahary eto nefa tsy afaka misitraka izany akory ny mponina teratany. Tsy nampihemotra ny fahantrana ny fihazakazahana tamin’ny fitrandahana ireo harena ireo izay mihamanify arakaraky ny fahamaizana nanao varo-boba ny fanomezan-dàlana ny vahiny hitrandraka azy.
Misy ny lalàna fa toy ny sary vongana fotsiny, tsy maharo ny marina sy ny rariny. Noho ny baranahiny sy ny tsikombakomba, maro ny làlana miolaka ahafahana miodidina mba tsy hiharan’ny lalàna. Eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany matetika, tsy mangarahara ny fahazoan-dàlana. Misy amin’ireo voalaza ho ara-dalàna no natao mangingina sy antsokosoko. Efa eny an-tanety sy any an-dohasaha eo am-pitrandrahana ny vahiny vao gaga ny mponina. Tonga hoazy ny hatezeran’ny vahoaka. Tsy akaiky an’Antananarivo toa an’i Soamahamanina daholo ireny ka tsy re ako ny feon’ireo vahoaka midradradradra noho ny herisetra amin’ny fandravaravana tsy misy antra ny tontolo manodidina. Ratra mametraka takaitra sarotra sitranina no tavela any amin’izay tany diavin’ny mpitrandraka vahiny tsy mandova ny fahasimbana. Potika ny tany, tsy fantatra izay fetran’ny harena voajifa toy ny nofaohan’ny tadio. Ny hany tazana dia setroka hodidinina zavona.
Tsy mahafantatra firy amin’izany ny vahoaka. Nefa azonkazony an-tsaina ihany ny fitrangan’ny toe-draharaha. Ny fahasahiranana mikiky ny maroanisa fa izay mifandimby miakatra eo amin’ny fitondrana anefa toa matavy am-pitoerana fotsiny. Tsy vitan’ny hoe tsy mahefa amin’ny fampandrosoana ny firenena izy ireny fa na dia ny fanamaivanana ny fangirifirin’ny fiainana zakain’ny mponina aza tsy vitany. Ifampitolomana sy irafesana ary tonga hatrany amin’ny ady saritaka ny fifaninanana amin’ny fahazoana fitondrana. Rehefa tonga eo moa dia miadankadana, mampiadan-tena sy mamahan-karena ny tandapa manodidina ny tena. Azo isaina amin’ny ratsan-tanana izay tsy nitombo be fananana tampoka eo amin’izany toerana izany. Harena avy aiza ireny ? Ny vokatra avy eto an-toerana tsy ahavitan-tena akory. Na ny vary foton-tsakafon’ny vahoaka aza mbola afarana avy any ivelany. Ny tahiry ao an-tsompitra izany no anilihana ampiadanan-tena. Aiza moa izay sompitra eo afa-tsy ny kibon’ny tany ?